Muujinta isleeg ka 11 ilaa 12 Bogga 3 - Fadlan U Gudub Dhamaadka Si Aad U Aragto Natiijooyin Badan
2BaO + C → 2Ba + CO2
xabagta barium kaarboonka barium carbon dioxide
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2BaO + C → 2Ba + CO2
Waa maxay xaaladda falcelinta BaO (barium oxide) ee uu la falgalo C (kaarboon)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Ba (barium) iyo CO2 (kaarbon dioxide)?
Isku qas qadar yar oo ah budada barium oxide iyo budada dhuxusha, ka dibna ku rid salka tuubada tijaabada qalalan, kuleylka
Dhacdada ka dib BaO (barium oxide) waxay la falgashaa C (kaarboon)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2BaO + C → 2Ba + CO2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta BaO (barium oxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee BaO (barium oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh BaO (barium oxide) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Ba ​​(kaarboon)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ba (barium) badeecad ahaan?
xabagta barium ammonia biyaha nitrogen barium
3 2 3 1 3 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3BaO + 2NH3 H 3H2O + N2 + 3Ba
Waa maxay xaalada falcelinta ee BaO (barium oxide) ay kaga falceliso NH3 (ammonia)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo N2 (nitrojiin) iyo Ba (barium)?
Ka gudub gaaska ammonia tuubo dhalo ah oo ay kujiraan barium oxide kulul
Dhacdada ka dib BaO (barium oxide) waxay la falgashaa NH3 (ammonia)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3BaO + 2NH3 H 3H2O + N2 + 3Ba
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Ba ​​(ammonia)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ba (barium) badeecad ahaan?
Muujinta isleeg ka 11 ilaa 12 Page 3